စပိန်ရှိကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများသို့သွားရောက်လည်ပတ် | ခရီးသွားသတင်း
Carmen Guillen | | စပိန်မြို့ကြီးများ, Cordoba, ဆွေမျိုး, Granada, ဆီဗီလာ
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားမှအခြားနေရာများကိုမသိခင်အချို့စပိန်နိုင်ငံများသို့သွားလိုသောသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာလည်းရှိသည်။ အရာအားလုံးကိုပြောရမည်။ အကြောင်းပြချက်မှာရိုးရှင်းပါသည်။ စပိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြောက်မှတောင်သို့ (သို့) အရှေ့ဘက်မှအနောက်သို့သွားနိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးသည်ဤအမွေအနှစ်နေရာများကိုရှာဖွေရာတွင်မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်အတွက်ထွက်ပေါက်အတွက်အကြံပြုချက်များဖြစ်သည်။
ဒီနေ့မှာတော့ Actualidad Viajes မှာသူတို့ထဲက ၅ ယောက်လောက်ကိုသာကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်များစွာသောအရာတွေရှိတယ်။ မင်းတို့ငါတို့နဲ့ဝေးဝေးနေဝေးဝေးကနေစောင့်ကြည့်ဖို့သင်နဲ့အတူနေနေတာလား။
1 Granada ရှိ Alhambra
3 Segovia ၏ရေလမ်း
4 Seville နှင့်၎င်း၏ဘဏ္treာကို
Granada ရှိ Alhambra
Granada ကိုမကြာသေးမီကစပိန်နိုင်ငံတွင်အလှဆုံးမြို့အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံး Andalusian အလှတရား, Córdobaနှင့်အတူနောက်ဆုံးယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်သတိရထင်ပါတယ်။ ငါနှစ် ဦး စလုံးမြို့ကြီးများသို့ရောက်ခဲ့ကြပြီးသူတို့နှစ် ဦး စလုံးကြိုက်နှစ်သက်သည်။ သို့သော်ဟုတ်သည်။ Granada သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အရသာအရ၎င်းကိုကျဉ်းမြောင်းစွာရိုက်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ဂရနာဒါတွင် Andalusia နှင့်စပိန်နိုင်ငံများရှိအထင်ရှားဆုံးသောအဆောက်အ ဦး တစ်ခုကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါ Alhambra။ ကနေမြင်ကြခြင်းရှိမရှိ စိန့်က Nicholas '' ကင်းစောင့်သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်၎င်း၏ခြေထောက်ပေါ်သို့တက်လှမ်းခြင်းသည်သင်အံ့အားသင့်စေမည့်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါဟာကနေတည်ဆောက်ထားသည် ၉ ရာစုဘယ်အချိန်မှာ 889 ၌တည်၏ Sawwar ben hamdun သူသည် Alcazaba ကိုခိုလှုံပြီး Granada ပိုင်သော Cordoba ရှိ Caliphate တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောလူထုအခြေပြုတိုက်ပွဲများကြောင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ရသည်။
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်သင်မလည်ပတ်နိုင်ပါက၎င်းမှစိတ်မပူပါနှင့် စာမျက်နှာသင်သည်တကယ့်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဤအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ၏နက်ရှိုင်းသောသမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာနိုင်လိမ့်မည်။
Alhambra သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးစီးပွားကိုကိုင်တွယ်ခဲ့ချိန်ကဖော်ပြခဲ့ပြီး၎င်းသည်ယနေ့သမိုင်းဝင်မြို့တော်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းထဲမှဖယ်ရှား။ မရနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သမိုင်းဝင်အချက်အချာနေရာကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကယူနက်စကိုကကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ရာရောမတံတားပေါ်တက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည် ဗလီ နှင့် Cordoba ဂျူးရပ်ကွက်၏ teahouses တ ဦး တည်းအားဖြင့်ကျဆင်းသွားကျနော်တို့က၎င်း၏ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်ထိုက်တန်ချိန်းသဘောပေါက်လာတယ်။
ယခုတိုင်ဖော်ပြပြီးသောဆိုဒ်များအပြင်၊ သင်ကော်ဒိုဘာသို့သွားလျှင်၊ တရားဇရပ်သို့သွားရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည် San Basilio ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်Alcázar de los Reyes Cristianos.
ဒါကိုကျွန်တော်မမြင်ရသေးပါဘူး ဒီအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဟာရောမတွေရဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်၊ စပိန်မှာငါတို့ထိန်းသိမ်းထားဆဲနဲ့သင်မြင်တွေ့လိုက်ရတာကိုအထင်ကြီးလေးစားစရာကောင်းတာကလည်ပတ်ဖူးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အဆိုအရ။ များသောအားဖြင့်၎င်းကိုတင်ပြသောဓာတ်ပုံများတွင်၎င်း၏အရွယ်အစားကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးမထားပါ၊ ရေပြတ်ရုံမျှနှင့်ဘာမျှမကသေးပါ။ အရှည် 15 ကီလိုမီတာ
တွေ့ပြီ ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ၎င်းသည်သံသယမရှိဘဲ Segovia ၏ကိုယ်စားပြုမှုသင်္ကေတဖြစ်သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာဆွဲဆောင်ပြီးမကြာသေးမီကမှတွေ့ရှိခဲ့သောအချက်မှာကျောက်တုံးနှင့်ကျောက်တုံးအကြား၎င်းတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်အုတ်ခဲများသို့မဟုတ်မော်တာများမရှိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရာစုနှစ်များစွာကြာအောင်ဖြစ်ပေါ်စေသောအလေးနှင့်အလေးစနစ်ဖြင့်ထားရှိသည်။ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်။ ဤအရူးအမူးရောမများ!
Seville ဟာ Andalusian ရဲ့အကောင်းဆုံးဘဏ္ofာရေးစာရင်းမှာသိပ်နောက်မကျပါဘူး။ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်စာရင်းထဲမှာရှိတယ်။ အဆောက်အအုံများကိုလှပစွာကြည့်ရှုခဲ့သကဲ့သို့အဆောက်အအုံများကိုအမှတ်အသားပြုသည် Giralda, ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, အ Alcazar o အဆိုပါအင်ဒီး၏မော်ကွန်းတိုက်။
ဂက်စကတ်ကလစ်ဗ်မြစ်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်Alcázarသည်မွတ်စလင်များဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုဖော်ပြခဲ့သည့်အဆောက်အအုံနှစ်ခုစလုံးသည် ၄ ​​င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအခန်းကဏ္ to ကြောင့်မြစ်နှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
Salamanca အကြောင်းပြောနေတာကအဟောင်းနဲ့သူ့ရဲ့တက္ကသိုလ်အကြောင်းပါ။ ဒါက၏မော်ဒယ်ကိုအောက်ပါရာထူးတိုးခဲ့သည် Bologna တက္ကသိုလ်နှင့်သူ၏အသိပညာမျိုးစေ့ကို Gothic, Renaissance နှင့် Baroque အဆောက်အအုံများတွင်စိုက်ထူခဲ့ပြီး Plaza Mayor နှင့် Cathedral (Old and New) တို့သည်ယူနက်စကိုမှကာကွယ်ထားသောမြို့ဟောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီ - ဆောင်းရာသီဤနှစ်၏ဤအချိန်တွင်လည်ပတ်ရန်ထူးခြားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ ၅ ခုသည်သူတို့၏စွဲမက်ဖွယ်ရာများကိုကျော်လွန်သွားပြီးမကြာမီသင့်ထံမှလာရောက်လည်ပတ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ငါပြောသည့်အတိုင်းငါ Segovia ဆိုင်းငံ့ရှိသည်။ မကြာခင်မှာပဲ…
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » စပိန်အတွက်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများသို့သွားရောက်လည်ပတ်